SAMULAŞ’a Ek 20 Milyon TL Sermaye Artışı Komisyondan Geçti | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ55 Samsunကော်မရှင်မှချမှတ်ထားသောSAMULAŞသို့အပိုဆောင်း 20 Million TL Capital တိုးမြှင့်ခြင်း
12 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Samulaş, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
ကော်မရှင်ထံမှ samulasa နောက်ထပ်သန်း TL မြို့တော်တိုး
Samsun မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေး Samun မြို့ပြမြူနီစီပယ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးİmarİnşaat Yat ။ စန်း။ Tic ။ A.Ş. (SAMULAŞ) 20 သန်း TL အပိုဆောင်းအရင်းအနှီးဝယ်လိုအားအဆိုပြုချက်ကိုအများစုမဲဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်နှင့်ပါလီမန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်ကော်မရှင်အစည်းအဝေးကိုဒုတိယဥက္ကchairman္ဌ Nihat Soğukကဥက္ကchair္ဌတာဝန်ယူပြီးကျင်းပခဲ့သည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ၀ င်များကလွှတ်တော်မှကော်မရှင်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည့်အရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ညီလာခံ၏ပထမဆောင်းပါး၊ “ ဆမ်ဆန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာန 2020-2024 နှစ်အလိုက်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာဆမ်ဆွန်မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအီ Ilhan Bayram ကမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှည်လျားသောတင်ပြချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အပိုဆောင်း 20 သန်း TL မြို့တော် SAMULA comes လာသည်
ကော်မရှင်2။ အစီအစဉ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာSAMULAŞ၏လက်ရှိမြို့တော်ကို 50 သန်း TL မှ 20 သန်း TL သို့ထပ်တိုးရန် 70 သန်း TL တိုးမြှင့်ရန်အဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ 1 ထက်ပိုပြီးပြောဆိုသောဆောင်းပါးတွင်အဖွဲ့အားလုံးကသူတို့၏သဘောထားများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
SAMULAŞ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Enver Sedat Tamgacıက၎င်းတို့အနေဖြင့်အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်လိုက်သောအခါဤအရေအတွက်သည် 53 သို့တိုးလာသည်။ တစ်လလျှင် 75 သန်း 1 ဆိုသည်မှာလူတစ်ထောင်ပြောင်းရွှေ့သွားသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤခရီးသည်များ၏ 620 ရာခိုင်နှုန်းသည်လက်မှတ်အပြည့်အစုံ၊ 45 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေး၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများသို့အပိုလျှော့စျေး 30 ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်တရားဝင်သယ်ဆောင်သောခရီးသည်များ၏ 6,5 ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသည်ရာခိုင်နှုန်း 15 ရာခိုင်နှုန်းမှာ ultralite သံလိုက်ကဒ်ကိုသယ်ဆောင်နေသည်။ လတိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လမ်းရထားသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်3TL ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နာရီလျှင် 750 TL လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်ဝင်ငွေမှာ3သန်း TL ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စရိတ်မှာ3သန်း3တစ်ထောင် TL ဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကားအတွက်တစ်နေ့လျှင် 800 တစ်သိန်းခန့်သယ်ဆောင်လာရသည်။ 25 ရာခိုင်နှုန်း၏အခမဲ့သည် 10 ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်လလျှင် 15 ထောင်သောင်းချီပါသည်။ လစဉ်လတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 750 သန်း 1 တစ်ထောင် TL လောင်စာဆီအသုံးစရိတ်များရှိသည်။ ဤသည်ကီလိုမီတာနှုန်း 200 TL နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အပိုပစ္စည်းများအဖြစ် overhead ကုန်ကျစရိတ်သူတို့ကိုထိပ်ပေါ်မှာလာကြ၏။ ဘတ်စ်ကားများမှလစဉ် ၀ င်ငွေသည်3သန်း 1 တစ်ထောင် TL ဖြစ်ပြီးလစဉ်ကုန်ကျစရိတ်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 150 သန်း 1 တစ်ထောင် TL ဖြစ်သည်။ ဒါကပြောပါတယ်, 770 တထောင်ခန့်လစဉ်လတိုင်းပျက်စီးနေကြသည်။
"နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ 31 သန်းဖြစ်ပြီးစရိတ် 33,5 သန်းဖြစ်ပါတယ်"
Tamgacıသည်SAMULAŞ၏ယခင်နှစ်ကြွေးမြီများနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေအလားအလာများကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ “ 2017 တွင် tram ၏ဝင်ငွေသည် 31 သန်း TL ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သည် TL 33,5 သန်းထက်ပိုသည်။ 2017 တွင်၊ trn ကြောင့်3သန်း TL သာပျက်စီးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများမှာ 2016 မှစ၍ တိုးတက်မှုမရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်လောင်စာဆီများမြင့်တက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ring and express bus များအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3,5 million TL ပျက်စီးခဲ့သည်။ 750 ထောင်ပေါင်းများစွာကို Tramvay Newspaper မှဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ 2018 တွင် 2017 သန်း TL တိုးတက်မှုသည်6နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရှိသည်။ 2018 တွင်၊ Tramvay Gazetesi တွင်လည်း 850 ထောင်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျသည်။ 2019 မှာကျနော်တို့ 30 million TL ဆုံးရှုံးမှုကိုခန့်မှန်းခဲ့တယ်။ 2017 တွင်SAMULAŞသည်၎င်း၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ 8 trams များကိုဝယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50 သန်းချေးငွေများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာလည်းငွေကြေးကုန်ကျမှုရှိတယ်။
အခြားပြည်နယ်များရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတာဂါစီက“ X သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အမြတ်ရချင်ရင် 2-3 ပြNနာရှိတယ်။ 1 ကိုမြှင့်တင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤသည်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားသောအရာတစ်ခုခုသည်မဟုတ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်လမ်းနှင့်ရေကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောကျပံ့။ Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်ယခုနှစ်အတွက် 2019 သန်း TL ၏မြို့တော်ကို 240 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Kayseri Metropolitan Municipality 38,5 သန်း TL၊ Gaziantep Metropolitan Municipality 15 သန်း TL, Malatya Metropolitan မြူနီစီပယ် 24 သန်း TL 2019 အတွက်မြို့တော်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သာအားဖြည့်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်အချို့သောကာလ၌ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ 2019 နှစ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာဖြင့်ပြီးမြောက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်တွင် 2020 ၏ပထမသုံးလပတ်အတွက်အရင်းအနှီးတိုးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်မှုကိုတင်ပြပါမယ်။
အကယ်၍ အဆိုပါဆောင်းပါးကိုဆမ်ဆန်မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်စည်းဝေးပွဲတွင်အတည်ပြုပါကSAMULAŞအား 20 million TL တိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး Arkas ဦးပိုင်အတွက်မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ် 23 / 08 / 2012 Arkas Holding သည်တူရကီနှင့်မြေထဲပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်နက်နိုင်ငံများ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် Marmaray စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့်၎င်း၏မြို့တော်တိုးချဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပမာဏနှင့်အညီတိုးချဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Arkas ...
အဆိုပါမြို့တော်ကနေမှတ်တမ်း iGain တိုးပေးရန် 30 / 07 / 2018 25 အတွက်နှစ်အောက်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သစ်တည်ဆောက်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည့်İGAသည် 1 ဘီလီယံ 790 သန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏မြို့တော်ကို6ဘီလီယံ 240 သန်း TL သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ IGA, Fortune 500 ကုမ္ပဏီများစံချိန်တင်တိုးတက်မှုများနှင့်…
နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းဟာရထားလမ်းလုပ်ကိုင်ရန်တန်းစီ 15 / 08 / 2013 အဖြစ်ရထားလမ်းလုပ်ကိုင်ရန်နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်း၏ entry ကို: နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီး, ရထားလမ်း၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်အနေဖြင့်ရှယ်ယာဖမ်းပြီးချင်တူရကီအတွက်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ to သို့မီးရထားလမ်းဖွင့်ရန်မျှော်မှန်းထားသောစည်းမျဉ်းအရ Istanbul နှင့် Ankara ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများ၏ရုံးများ ...
samulaşထံမှ 1 ။ စက်မှုဒီဇိုင်းအစည်းအဝေး 07 / 11 / 2015 SAMULAS ကနေ XULUMX ။ စက်မှုဒီဇိုင်းအစည်းအဝေး - ဆမ်ဆန်မြို့ပြစည်ပင်သာယာSAMULAŞ A.Ş. 1 မှဝယ်ယူမည့် trams အသစ်များ စက်မှုဒီဇိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင် Gar-Tekkeköyမီးရထားလမ်းတိုးချဲ့မှု…
ဒါဟာရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး Arkas ဦးပိုင်အတွက်မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်
အဆိုပါမြို့တော်ကနေမှတ်တမ်း iGain တိုးပေးရန်